Kubvumbi mapenzi, kuunganidzwa kweanonakidza majee ane chekuita neakavhurwa sosi | Linux Vakapindwa muropa
Kubvumbi mapenzi, kuunganidzwa kweanonakidza majee ane chekuita neakavhurika sosi
Nezuro, Kubvumbi 1 (04/2020/XNUMX) zvinyorwa zvakasiyana siyana zvakaburitswa pamambure nezve nhau izvo kune vazhinji vanogona kunge vasiri munzvimbo uye chinangwa ndechekuti avo vasingazive nezve "April mapenzi" vanowira majee aya.
Imwe semuenzaniso yaive iyo yatinoshanda nayo Pablinux akagovana pane iyo blog nezuro nezve chirongwa chakaburitswa neveKDE neGnome vanogadzira vaunzwa iyo KNOME tafura Yakagadziridzwa pamwe chete, inosanganisa tekinoroji yemamwe mapurojekiti uye yakagadzirirwa kufadza vese vatsigiri veGNOME uye vadikani veKDE.
1 Guix inosiya iyo Linux kernel
2 Vanogadzira Kernel vanozoongorora chete shanduko
3 Cloudflare Inozivisa Nyowani Services
4 Kodi inoderedza kutenderera mhando
Guix inosiya iyo Linux kernel
Zvimwe April benzi izvo zvakabata pfungwa dzangu nezuro yaibva kuGNU Guix chirongwa chii chaivapo yakazivisa chinangwa chayo chekumira kushandisa iyo Linux kernel uchifarira iyo GNU Hurd kernel.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kushandiswa kweHurd yaive yekutanga chinangwa cheiyo chirongwa cheGuix uye ikozvino chinangwa ichi chave chinhu chaicho.
Kuenderera mberi kutsigirwa kweLinux kernel muGuix kwakanzi hakuna kukodzerasezvo purojekiti isina zviwanikwa zvekutsigira ma editions maviri panguva imwe chete. Iyo Guix 1.1 kuburitswa ichave yekupedzisira kutumira neLinux-Libre kernel.
MuGuix 2.0, Linux-Libre rutsigiro ichabviswa zvachose, asi sarudzo yekushandisa iyo Guix package maneja pamusoro pechitatu-bato Linux kugoverwa kuchasara kumashure. Zvinokosha kuti kugona kwekutanga kushandisa GNU Kukuvadzwa mavhiki mashoma apfuura kwakanyatso kuitiswa muGuix.
Vanogadzira Kernel vanozoongorora chete shanduko
Ukuwo, chinyorwa chakakurudzirwa yeLinux kernel vagadziri kuti vatarise otomatiki shanduko. Nezvo Vapindi vanotarisirwa kumanikidzwa kushandisa nguva yakawanda kudzidza nekuongorora shanduko.
Zuva nezuva, huwandu hwezvimedu huri kuramba huchiwedzera uye maitiro ekuzviongorora anova anorwadza, pasina nguva yekunyora yako wega kodhi.
Iyo script inogadzirisa iri dambudziko nekungoerekana yawedzera iyo "Yakaongororwa ne" tag.. Iyo yekuvandudza inongofanira kugara pasi uye kuongorora mafungiro evamwe vatori vechikamu pane shanduko dzakagamuchirwa.
Kuti usamutse kufungira mushure mekugamuchira tsamba, chinyorwa hachitumire mhinduro inoongororwa nevezera ipapo, asi kuburikidza nekumwe kunonoka.
Cloudflare Inozivisa Nyowani Services
Uyewo Cloudflare akabatana nemweya zvemajee ezuva rino uye ndiko kuenderera mberi netsika yekusaratidza majee musi waApril 1 pasi pekunyepedzera kwemajee, Cloudflare yakazivisa vhezheni yebasa 1.1.1.1 yekushandisa kwemhuri.
kunze kwaizvozvo maviri matsva yeruzhinji DNS 1.1.1.2 uye 1.1.1.3 aburitswa, izvo zvinopa kusefa kwemukati. 1.1.1.2 inovhara kuyedza kuwana nzvimbo dzine hunyengeri uye 1.1.1.3 inodzivirirawo kuwana zvemukati zvevakuru
Sezvineiwo, firita 1.1.1.3, iyo yaive nechinangwa chekuvharira zvirimo zvinokanganisa majee evana, zvakare yakapa kuvharirwa kwenzvimbo dzeLBBTQIA, zvichikonzera dutu rekutsamwa pakati pevadiki vane hukama. Vamiriri veCloudflare vakamanikidzwa kukumbira ruregerero uye kubvisa aya masosi kubva kusefa.
Kodi inoderedza kutenderera mhando
Pakupedzisira imwe yemapurojekiti akabatana nhasi, vaive vanogadzira Kodi media media, umo mune chiziviso vakazivisa kuti nekuda kwekuwedzera kwemutoro pamambure nekuda kwekuchinja kwevanhu vazhinji kuzoshanda pamba, semuenzaniso, Netflix, YouTube neAmazon services zvakateverwa, izvo zvakadzora mhando yeasipo vhidhiyo kuburitsa.
Kuchengetedza bandwidth, vhidhiyo paKo inozoratidzwa mune yakadzora ruvara mu4-bit monochrome modhi uye chete 1 chiteshi ichashandiswa odhiyo.
Kurasikirwa kwehunhu kuchabhadharwa nekushandisa muchina wekudzidza system unodzosera izvo zvakarasika zvikamu.
Nhepfenyuro uye IPTV ichaganhurirwa kumatepanhau enharaunda chete. Kuti uve nechokwadi chekuzviparadzanisa wega, Kodi inongoshanda chete kubva kunetiweki yekumba uye kuwana kuburikidza neruzhinji rwusina waya network ichavharwa. Kuti usangane nemamiriro ezvinhu enharaunda, kutarisa kuchazogoneka chete pamasikirini akakura kupfuura masendimita makumi matanhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubvumbi mapenzi, kuunganidzwa kweanonakidza majee ane chekuita neakavhurika sosi
ExTiX 20.4 "Mini" inosvika yakavakirwa paUbuntu 20.04 uye Linux 5.6